Online Juction Feed: 2014-10-19
थेग्दैन मायाँ भिखारीको चाल भएपछी
पोल्दैन घामले गोधुलीमा लाल भएपछी
थेग्दैन मायाँले भिखारीको हाल भएपछी
डुब्दैछ जीन्दगी तार्नलाई कुनै डुङ्गा छैन
मुटुमा दुःख, वेथा र आँसुको ताल भएपछी
विर्सियो निदले परेलीमा बाँस बसेपछि
आँखामा आँसुको सागर छाल भएपछी
घाइते भएर छट्पटीँदै बाँच्नु पर्दो रहेछ
गोलीले लागेको हरिणको चाल भएपछी
अँधेरी रातको बर्षाझै भयो जीन्दगानी
भाग्यको साथमा नियतिको जाल भएपछी
पोल्दैन घामले गोधुलि साँझ भएपछी
थेग्दैन मायाँले भिखारीको चाल भएपछी
श्रीमानलाई कसरी खुसी बनाउने ?
✍ जब महिलाको विवाह हुन्छ तब उनी यहि मनोकामना लिएर बसेकी हुन्छिन् कि उनको श्रीमानले उनलाई सधैँ खुसी राखोस्। महिलाले मात्र होइन समाजका हरेक प्राणीले यहि सोच्ने गर्दछ कि एउटा श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीलाई सधैँ खुसी राख्नुपर्छ। तर यो कसैले पनि सोचेको हुँदैन कि श्रीमतीको पनि आफ्नो श्रीमानलाई खुसी राख्ने कर्तव्य हुन्छ। श्रीमान–श्रीमती एक रथको दुई पाङ्ग्रा भएका कारण दुबैको खुसी महत्वपूर्ण हुने गर्दछ।
तर यदि कहिलेकाँही तपाईंको श्रीमान उदास
देखिएमा तपाईंले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईंका श्रीमान् तपाईंका कारण नै दुःखी भइरहेको छन् कि वा अरु कसैका कारणले तपाईंको श्रीमान तनावमा भइरहेको तपाईंलाई राम्रो नलाग्न सक्छ। त्यसकारण हामी तपाईंलाई श्रीमानलाई सधै खुसी राख्ने तरिका बताउँदैछौँ:-
१. उनको कुराहरु सुन्नुहोस्: धेरै पुरुषहरुको यहि गुनासो हुने गर्दछ कि उनका श्रीमती कहिले पनि उनको कुरा सुन्ने गर्दैनन्। त्यसकारण जतिबेला तपाईंका श्रीमान कुराकानी गर्न थाल्छन्, उनको कुरालाई निकै मन लगाएर सुन्ने गर्नुहोस्।
२. उनको जिम्मेवारीलाई बाँड्नुहोस्: अधिकांश पुरुषहरु श्रीमतीले उनीहरुको वित्तिय र अन्य जिम्मेवारीहरु बाँडोस् भन्ने
चाहन्छन्। यदि तपाईंहरु दुबैजना काम गर्नुहुन्छ भने घरखर्च चलाउने श्रीमानको मात्र जिम्मेवारी हुँदैन। त्यसकारण दुबैजना मिलेर घरखर्च टार्नुहोस्।
३. उनको करियरमा रुची लिनुहोस्: तपाईंको विवाह भइसकेपछि आफू आकर्षक देखिने
कुरामा लाग्नुभन्दा आफ्नो श्रीमानको काम काजमा ध्यान दिनुहोस् जसबाट उनलाई तपाईं हरेक समय उनको साथमा हुनुहुन्छ भन्ने महसुस होस्।
४. पैसा बगाउन बन्द गर्नुहोस्: अनावश्यक रुपमा पैसा खर्च गरेको कुनै पनि श्रीमानलाई राम्रो लाग्दैन। तपाईंको बढिरहेको सपिङको बिलले तपाईंलाई तपाईंको श्रीमानबाट टाढा बनाइरहेको हुन्छ। यदि शपिङ गर्दा तपाईं आफ्नै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ भने यसबाट उनलाई केहि पनि फरक पर्दैन।
५. बेडमा उनलाई खुसी राख्नुहोस्: यदि आफ्नो श्रीमानलाई बेडमा खुसी राख्ने तरिका आउँछ भने तपाईं निकै भाग्यमानी हुनुहुनेछ। बेडमा अल्छीपन नदेखाउनुहोस्।
६. बेकारको बहस नगर्नुहोस्: श्रीमतीहरु आफ्नो श्रीमानसँग बेकारमा बहस गरेर कुरा लम्ब्याउने गर्दछन्। जसले गर्दा सम्बन्ध
नै खतरामा पर्न सक्छ। तपाईं यस्तो गर्नबाट बच्नुहोस्।
७. उनलाई तपाईंको कार्यक्रमको जानकारी दिनुहोस्: तपाईंलाई आफ्नो प्लान बनाउनका लागि श्रीमानको आवश्यक पर्दैन तर एक्लै केहि गर्नुभन्दा पहिले उनलाई त्यसको जानकारी दिनुहोस् जसले गर्दा उनलाई नराम्रो नलागोस्।
८. आफ्नो जीवन पनि बाँच्नुहोस्: कोही पनि साधारण पुरुष आफ्नी श्रीमतीले उनको लागि पनि समय निकालोस् भन्ने चाहन्छन्। यसो गर्नाले श्रीमानका लागि पनि केहि समय निस्कनेछ।
९. आर्थिक रुपमा उनलाई कहिले पनि धोका नदिनुहोस्: महिलाले कहिले पनि आफ्नो श्रीमानबाट पैसाको हिसाब–किताब लुकाउनु हुँदैन। यदि श्रीमानले आफ्नो पैसा तपाईंबाट लुकाएर राखेमा के तपाईंलाई राम्रो लाग्छ ?
१०. भविष्यको योजना एकसाथ बनाउनुहोस्:चाहे तपाईं लामो छुट्टीका लागि जान चाहेको कुरा होस् अथवा घरमा कोही नयाँ साथी आउने कुरा होस्, भविष्यको सबै योजना एकसाथ बनाउनुहोस्।
११. उनको आमा–बुवालाई इज्जत गर्नुहोस्:जसरी तपाईं आफ्नो आमा–बुवालाई माया र इज्जत गर्नुहुन्छ त्यसरी नै आफ्ना श्रीमानका आमा–बुवालाई सम्मान गर्नुहोस्।
१२. उनको साथी बन्नुहोस्: तपाईंहरु दुईमा श्रीमान–श्रीमतीको भन्दा साथीको सम्बन्ध बढि हुनु आवश्यक छ। आफ्नो श्रीमानको साथी बन्नुहोस्, उनको आमा अथवा बोस होइन।
Labels: सुखी जीवन
सम्बन्ध राख्नै नहुने ५ स्त्रीहरु
✍ पुरुषहरु स्त्रीहरुसँग सम्बन्ध राख्न लालायित हुन्छन्। विवाहित र अविवाहित दुवै खाले पुरुषमा महिलाहरुप्रति निकट हुने चाहाना उत्तिकै हुन्छ। तर सबै महिलासँग पुरुषले सम्बन्ध राख्नु उचित हुँदैन। यहाँ पुरुषले निकट संबन्ध राख्न नहुने स्त्रीहरुको बारेमा चर्चा गरिएको छ।
१. पूर्व प्रेमिकाः सकेसम्म पुरानो सम्बन्धलाई नखोतलेकै राम्रो हुन्छ। किन भने प्रेमिका पूर्व प्रेमिका बन्नु भनेको सम्बन्ध राम्रो नभएर टुङ्गिएको अर्थ लाग्छ। कतिपय सन्दर्भमा तपाइँ र उनीबीच गम्भिर समस्या भएकै कारण सम्बन्ध टुटेको हो। कुनै समस्या पर्दा वा दुःख लाग्दा पूर्व प्रेमिकाको सम्झना आउनु फरक कुरा हो तर उनलाई पुनः जीवनमा तान्नु पश्चातापका कारण मात्र बन्न सक्छ।
२. मिल्ने साथीकि बहिनीः आफ्नो मिल्ने साथीकि बहिनीसँग नजिकिने भुल कहिले पनि नगर्नुस्। यसले तपाइँको साथीसँगको सम्बन्ध मात्र धरापमा पार्दैन यसले आफ्नी सानी बहिनीलाई धोका दिएको भन्दै अनुहारमा मुक्का खाने खतरा समेत बढाउँछ। बहिनीसँगको निकटताले तपाइँको साथीसँगको सम्बन्ध पनि फिका हुन सक्छ।
३. कुख्यात महिलाः कुनै पनि महिला जसको विषयमा तपाइँले निरन्तर नकारात्मक समाचार मात्र सुन्नुहुन्छ उनीसँग पनि नजिकको सम्बन्ध नराख्नुस्। सामान्य सम्बन्ध राख्न यस्ता महिला काम लागे पनि गम्भिर सम्बन्धले समस्या निम्त्याउन सक्छ।
४. धनी खोज्दै हिँड्ने केटीः धनी केटाको खोजीमा भौतारिने केटीसँग पनि नजिक नभएकै राम्रो। धनी खोज्ने केटीसँग डेट जान रमाइलो भएपनि लामो सम्बन्ध बनाउनु आफूलाई समस्यामा पार्नु जस्तै हो।
५. साथीको पुर्व प्रेमिकाः यदि तपाइँको साथीसँगको सम्बन्ध मूल्यवान छ भने उसको पूर्व प्रेमिकासँग नजिकिनु उचित हुँदैन। यो साथीसँगको सम्बन्धप्रतिको इमान्दारिता पनि हो। यसले तपाइँको छविमा पनि समस्या ल्याउन सक्छ भने साथीबीच नै दुस्मनी हुने खतरा समेत रहन्छ।
यौन उत्तेजना नहुनुको समस्या के हो जानी राखौँ
यौन उत्तेजनाको समस्या महिला र पुरुष दुवैमा हुने गर्दछ। महिलाहरुमा उत्तेजनाको बेला यौनाङ्ग मुलायम भै फैलिने र रसिलो हुने प्रक्रियामा गड्बडी हुने समस्या हुन्छ। धेरै महिलाहरुमा डर, त्रास, संकोच जस्ता मनोगत कारणहरुले पनि यौन उत्तेजना आउदैन। केहि महिलाहरुमा संक्रमण, हर्मोनको समस्या वा अन्य कुनै औषधिको सेवनले पनि यौन उत्तेजना नआउने हुन्छ। पुरुषहरुमा भने प्रयाप्त समयसम्म लिङ्ग ठाडो र कडा नरहने समस्या आउनसक्छ। पुरुषमा पनि शारिरीक रोग, मद्यपान तथा लागूपदार्थ र औषधि सेवन जस्ता कारणले पनि यौन उत्तेजना नआउने हुन्छ। तर यौन क्रियाकलापमा लिङ्ग उत्तेजित हुन्न भने मनोगत समस्या भएको बुझ्न सकिन्छ। प्रायः डर, त्रास, उदासिनता, चिन्ता, थकान वा यौन चाहनाको कमिले पनी यौन उत्तेजना नआउने हुन्छ। उमेर छिप्पिँदै गएपछि यौन उत्तेजनाको समस्या पनी बढ्दै जाने गर्छ। यस्ता समस्याग्रस्त महिला र पुरुष दुवैमा रहेको डर र त्रासलाई मनोवैज्ञानिक विधिद्धारा निवारण गर्दै लानुपर्ने हुन्छ। यौन समागमको चरम विन्दुमा आनन्द अनुभव नहुने समस्या तुलनात्मक रुपमा महिलाहरुमा बढी देखिन्छ। यसका दुई कारण छन्: पहिलो महिलाकै आफ्नो विभिन्न कारणले चरम विन्दुमा नपुग्नु र दोस्रो कारण पुरुषमा यौन ज्ञान, अनुभवको कमि तथा विभिन्न व्यक्तिगत र सामाजिक दृष्टिकोणका कारण महिलाको यौन आवश्यकता पुरा नहुनु हो। पुरुषमा भने यौन उत्तेजना ढिलो वा चाडो वीर्य स्खलन वा वीर्य स्खलननै नहुन सक्छ। हस्तमैथुन र अन्य तरीकाले आनन्द महसुस हुने वानी परेका कतिपय पुरुषहरुमा यौन समागमले वीर्य स्खलन नहुन सक्छ। यौनलाई दवाइने सामाजिक, पारिवारीक माहोल वा दृष्टिकोण तथा विभिन्न औषधि र लागुपदार्थको सेवनले पनि यस्तो अवस्था श्रृजना हुनसक्छ। यौन शिक्षा वा ज्ञान, यौनसम्बन्धी भ्रमको निवारण र दम्पतिबीच समझदारी नै समस्याको समाधानमा महत्वपूर्ण हुन्छ। विशेषगरी पुरुषले महिलालाई यौन प्रक्रियाको चरणदेखि विभिन्न क्रियाकलापबाट आनन्दको चरणतिर लानुपर्ने हुन्छ। प्राकृतिक हिसाबले पुरुष चाँडो र सजिलै उत्तेजित भई चरम सुखको चरणमा पुग्ने भएकाले महिलालाई यस्तो चरणसम्म पुर्र्याउन पुरुषले बिस्तारै सहवासको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु र उत्तेजित पार्नुपर्ने हुन्छ।
सेक्स लाइफमा खानाबाट कसरी सुधार ल्याउने?
आजको तनावपूर्ण व्यस्त जीवनमा सेक्सको इच्छा कम हुँदै जानु ठूलो कुरो होइन। तर यसले गर्दा तपाईको दाम्पत्य जीवनमा रुखोपना आउन थाल्छ। यस्तोमा आफ्नो खानपानमा केही परिवर्तन गरेर तपाईले पनि आफ्नो सेक्स लाइफ र रोमान्सको मजा बढाउन सक्नु हुन्छ। यहाँ यस्तै केही खानेकुरोको बारेमा बताइएको छ। यिनलाई आफ्नो दैनिक जीवनमा सामेल गरेर आफ्नो सेक्स लाइफमा सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। १. तरबूज नया बियाग्राको नामले चर्चित तरबूजमा सिटुलिन नामको अमिलो एसिड हुन्छ जसले ब्लड प्रेसरलाई रिलैक्स गरेर सेक्स इच्छालाई बढाउँछ। २. शताबरी यो एक किसिमको साग हो। यसमा भिटामीन बी हुन्छ जुन सेक्स इच्छा बढाउन निकै उपयोगी हुन्छ। ३. एबकाडो पोटाशियले भरपुर यो फलमा यौन इच्छा बढाउने सारा गुणहरु हुन्छन्। यसमा फोलिक एसिड पनि हुन्छ, जसबाट इनर्जि र स्टेमिना प्राप्त हुन्छ। ४. खुर्सानीमा एउटा यस्तो केमिकल हुन्छ। जसले ब्लड सर्कुरेशनमा तिब्रता ल्याउँछ र सेक्स मूड बनाउन मद्दत गर्छ। ५. महिलाहरुको लागि आफ्नो श्रीमानको सेक्स इच्छा जगाउन महिलाले पनि आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्न सक्छिन् र यस्तो प्रयास निकै उपयोगी पनि हुन्छ। केही अनौठो लाग्न सक्छ तर पुरुष हमेशा चाहन्छन् कि महिलाले नै प्रेमको दौरान सबथोक गरोस्। यो एउटा राम्रो ‘फन’ हो। यदि तपाईले अलिकति प्रयास गर्नु भयो भने श्रीमान एकछिन मै उत्तेजित हुन्छन्। किसिंग र लब बाइट्स किस र हल्का ढंगले दाग नपर्ने गरी बाइटसले पनि उत्तेजना बढाउन मद्दत गर्छ। हल्का आवाजमा रोमान्टिक कुरा गर्नुस। ख्याल राख्नुस् यो बेला तपाईले के भन्नुभयो भन्ने त्यति महत्वपूर्ण हुँदैन। कसरी भन्नुभयो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। महिलाहरुलाई पोर्न किताब पढ्न मनपर्छ भने पुरुषलाई फिल्म हेन मनपर्छ तपाईले उनलाई ब्लू फिल्म देखाउन सक्नुहुन्छ र कुनै पोजिशनको चर्चा गर्न सक्नुहुन्छ।
के तपाई अश्लिलचित्र तथा भिडियो हेर्नुहुन्छ हेर्नुहुन्छ भने त्यसले पार्ने प्रभाव पनि जान्नुहोस्।
✍ अश्लिलचित्र तथा भिडियो हेर्नेहरूको मष्तिष्क खुम्चिने एक अध्ययनले देखाएको छ। अश्लिल चित्र तथा भिडियो हेर्ने बानी र त्यसले पार्ने सम्भावित असरबारे अनुसन्धानकर्ताहरुले पत्ता लगाएको यो पहिलोपटक हो। अधिक समय पोर्नोग्राफी हेर्ने मानिसको मष्तिष्क जन्मैदेखि विशेष प्रकारको हुने पनि अनुसन्धानकर्ताको भनाई छ। बर्लिनको म्याक्स प्लाङक इन्सिच्युटका मुख्य अनुसन्धानकर्ता डा. सिमोन कुनले अश्लिलता र मष्तिष्कको आकार घट्ने विषयबीचको सम्बन्धबारे पत्ता लागेको पहिलोपटक भएको बताइन्। यद्यपि यसको आधिकारिक पुष्टि अहिलेसम्म भइसकेको छैन। अर्कोतिर अधिकारवादीहरुले अमेरिकामा गम्भीर रुपमा ‘पोर्नोग्राफीको महामारी’ फैंलिरहेको भन्दै यसलाई धूमपान, मध्यपान तथा ड्राइभिङ जस्तै रुपमा व्यवहार गरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन्। मोरालिटी इन मेडिया संस्थाका कार्यकारी निर्देशक डन हकिङ्सले अन्य प्रमुख स्वास्थ्य समस्या जस्तै पोर्नोग्राफीसंग पनि सामना गर्नुपर्ने बताए। उनले पोर्नोग्राफीले मानसिक रुपमा क्षति पुर्र्याइरहेको पनि बताएका छन्। अमेरिकामा अश्लिल भिडियो तथा चित्र राख्ने पोर्न साइटमा अमाजोन, ट्वीटर, युट्युब तथा नेटफ्लिक्स गरी चारवटामा जति संयुक्त भिजिटरभन्दा बढी भिजिटर हुने गर्छन्। इन्टरनेटमा अहिले ४२ लाख पोर्न वेबसाइट छन्। च्यारिटी युनिभर्सिटीकी डा. सिमोन कुनले आफ्नी सहकर्मी जुर्गेन गालियान्टसँग मिलेर २१ देखि ४५ वर्षबीचका ६४ जना स्वस्थ मानिससंग उनीहरुको अश्लिल भिडियो तथा चित्र हेर्ने बानीका बारेमा प्रश्न सोधेका थिए। अनुसन्धानकर्ताले ती मानिसको मष्तिष्कको नाप पनि लिएका थिए।
महिलालाई कुन अंगमा छुँदा के हुन्छ ? कुन अंगमा के गर्ने ?
✍ सबैजसो पुरुषलाई सँधै कौतुहलता हुन्छ
महिलाको शरीरमा कुन अंग कति संवेदनशील होला भनेर। अब भने यो विषयमा प्रश्न सोधिरहनु नपर्ने भएको छ। निक्कै लामो अनुसन्धानपछि शोधकर्ताहरुले महिलाको शरीरका कुन अंगको संवेदनशीलता के भन्ने प्रश्नको विस्तृत जवाफ दिएका छन्। हालै गरिएको एक अध्यनले स्त्रीको शरीरमा कहाँ विस्तारै स्पर्ष गर्ने कहाँ जोडले थिच्ने र कहाँ कम्पन पैदा गर्दा उनीहरुलाई यौनिकरुपमा उत्तेजित पार्न सकिन्छ भन्ने तथ्य बाहिर ल्याएको छ। अनुसन्धानका क्रममा महिलाको घाँटीमा हल्का स्पर्स गर्नु निक्कै प्रभावकारी हुने देखियो। कुनैपनि महिलालाई उत्तेजित तुल्याउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय स्तनको टुप्पो अर्थात निप्पल चलाउनु वा स्पर्ष गर्नु रहेको अध्यनकर्ताको निष्कर्ष छ। त्यसैगरी यौनक्रिडाको समयमा भने स्त्रीको योनीको बाहिरी माथिल्लो भागमा हुने क्लिटोरिसमा कम्पन पैदा गर्नु सबैभन्दा उत्तम रहेको पाहियो। यौन क्रिडाका लागि स्त्रीलाई तयार पार्दा यी विधी निक्कै प्रभावकारी मानिएका छन्। क्यानडाको युनिभर्सिटी डु क्यूबेक ए मोन्ट्रियलका अध्यनकर्ताहरुको टोलीले १८ देखि ३५ वर्ष उमेरका ३० महिलामा लामो समयसम्म यो अध्यन गरेको थियो। उनीहरुको शरीरका तीन भागमा विभाजित यो अध्यनले सयौं दिन देखि सोधिँदै आएको प्रश्नको जवाफ फेला पारेको हो। तर माथि भनिएका कुराहरु स्त्री थाकेको बेला, ध्यान अन्यत्रै बढीरहेको बेला वा अन्य तनावको बेला भने लागु नहुने अध्यनकर्ताको भनाइ छ। अध्यनकर्ताहरुले महिलाहरुलाई निर्वस्त्र पारेर टेवलमा सुत्न लगाएका थिए। र विभिन्न उपकरणको माध्यमबाट अंगहरुको स्पर्स गरी परीक्षण गरिएको थियो। #कुन अंगमा के गर्ने ?
-हल्का स्पर्षः घाँटी, पाखुराको अगाडीको भाग र योनीको पछिल्लो भाग (योनी र गुदद्वारको सीमा क्षेत्र) मा हल्का स्पर्ष गर्दा महिलाहरु उत्तेजित हुन्छन्।
-दवावः क्लिटोरिस र निप्पलमा चलाउँदा गर्दा स्त्रीहरु उत्तेजित हुन्छन्। तर स्तनको छेउँको भाग र पेटमा स्पर्षले भने खासै उत्तेजना ल्याउँदैन।
-कम्पनः क्लिटोरिस र स्तनमा कम्पन पैदा गर्दा स्त्री सबैभन्दा उत्तेजित हुन्छन्। यो अध्यन जर्नल अफ सेक्सुअल मेडिसिनमा प्रकाशित छ।
कम उचाइको पुरुषहरु बढी सेक्सुअल
✍ धेरैजसो महिलाहरु अग्ला पुरुषहरुको चाहना गर्दछन् तर एक नयाँ शोधका अनुसार कम उचाईका पुरुषहरु सेक्समा बढि मजा लिने गर्दछन्। शोधका अनुसार पुरुषको उमेर, उचाई, तौल र स्वास्थ्यका हिसाबले यौनजन्य क्रियाकलापको तुलना गर्ने हो भने जवान र स्वस्थ पुरुषहरु यौनजन्य क्रियाकलापहरुमा बढि आनन्दित हुने गर्दछन्। उक्त अनुसन्धानमा ५ फिट ९ इन्चभन्दा कम उचाई भएका पुरुषहरुको सहवास गर्ने मात्रा निकै धेरै हुने गरेको पाइएको छ। यो अनुसन्धान २० देखि ५४ वर्षको ५३ पुरुषहरुमा गरिएको थियो। अनुसन्धानमा पाइयो कि हप्तामा तीन–चार पटक सेक्स गर्ने पुरुषहरु कम उचाईका थिए। यसबाट यो प्रष्ट हुन्छ कि उचाई कम भएका पुरुषहरु यौनजन्य क्रियाकलापमा बढि सक्रिय हुने गर्दछन् । उक्त अध्ययनमा उमेरदार मानिसहरुमा यौनजन्य
क्रियाकलापमा कमी आउनुको कारण मोटोपन र पेटसम्बन्धि रोगहरु बताइएको छ। यद्यपी युवावस्थामा यो स्थितमा यसको प्रभाव कम
यो हार्मोनले बढाउँछ यौन आनन्द
✍ हुन त मानिसहरू सेक्समा आनन्द बढाउनका लागी बिभिन्न उपायहरू अपनाउने गर्दछन। तर हालै गरिएको एक सर्भेक्षण अनुसार यो कुरा एउटा यस्तो हर्मोन छ, जसलाइ सेक्स गर्नु ठिक अघि लिनाले सेक्स प्लेजर बढाउन सकिन्छ। बिजनेस स्टेन्डर्डमा प्रकाशित खबर अनुसार, स्टडीमा यो कुरा प्रमाणित समेत भएको छ कि ‘बन्डिंग’ हार्मोन निश्चित रूपमा सेक्सुअल प्लेजर बढाउँदछ, त्यसमा पनि बिशेषगरी पुरूषहरूमा।
-के हो यो हार्मोन?
सर्वे अनुसार, यदि सेक्स भन्दा ठिक अघि अक्सीटोसिन लिने हो भने सेक्सका क्रममा निकै सन्तुष्टि प्राप्त हुने मात्र नभै उत्कृष्ट क्लाइमेक्स पनि हुने गर्दछ। यद्दपी अक्सीटोसिन ति मानिसहरूलाइ दिने गरिन्छ जसको सेक्स इच्छाहरू कम हुने गर्दछ वा ती पुरूषहरूलाइ दिइन्छ जो लिंगमा उत्तेजना नहुने समस्याबाट पिडित रहेका छन। अक्सीटोसिनले केही यस्ता कुराहरूलाइ ठिक गर्दछ, जसले सेक्सुअल अनुभवलाइ रमाइलो बनाउँदछ र पार्टनरसंग इन्टीमेट हुँदाको मज्जालाइ दुइगुणाले बढाउने गर्दछ। यो रिसर्च जर्मनीको हेनोव्हर मेडिकल स्कूलद्वारा गराइएको थियो।
-कसरी गरियो यो स्टडी ?
यस स्टडीमा २९ जोडीहरूलाइ समावेश गरिएको थियो, जसलाइ अक्सीटोसिन नेजल स्प्रे र अन्य तरीकाहरू सेक्स गर्नु ठिक अघि दिइएको थियो। सेक्सपछि यी जोडीहरूलाइ उनीहरूको अनुभवलाइ लिएर प्रश्न गरियो। यसको नतिजा के पाइयो भने यदि सेक्स ड्राइव कम छैन र लिंगमा उत्तेजनाको कमी छैन भने ती पुरूषहरूले निकै राम्रो चरम आनन्दको अनुभव गरेका थिए। पुरुषहरूका अनुसार उनीहरू धेरै सन्तुष्ट भएका थिए, अन्य समयको सामान्य सेक्सको तुलनामा।
त्यसैगरि महिलाहरूले आफ्नो सेक्सुअल इच्छाहरू बढेको कुरा बताएका थिए। यो स्टडी जरनल हार्मोंस एण्ड बिहेवियरमा प्रकाशित भएको छ।
छारे रोगको पहिचान र प्राथमिक उपचार
✍ छारे रोग मानिसलाई मात्र नभएर पशु समेतमा देखा पर्ने एक किसिमको मानसिक रोग हो। यो रोगलाई मृगी, चडिफाउ, फफडके, रिङ्ने, आदी विभिन्न नामहरू दिएको पनि पाइन्छ। प्राय जसो कमजोर दिल भएका व्याक्तीहरूलाई छारे रोगको रोगको सम्भावना बढी हुने अनुमान गरिएको छ। यो रोग लाग्ने रोगीले कहिले कतिखेर र कहाँ लाग्न सक्छ भन्ने पूर्वानुमान गर्न सक्दैन तर पनि धेरै मानिसको भेला, रंगी विरंगी कपडा, आँखा तिरमिराउने घाम, नदीमा उफ्री रहेको पानी र पञ्चेबाजाको धुन सुने पछि यो रोगका रोगीहरू अचानक मुर्छा (अचेत) अवस्थामा भएर लडेको देखिन्छ। यो रोगको रोगीलाई ग्यारण्टीका साथ निको पार्न सकिने कोही ईलाज त छैन तर पनि कति पय डाक्टर तथा वैद्यहरू मिर्गिको रोगी ठिक बनाउन सकिने दावि गर्छन्। छारे रोगीको अपरेसन नगर्दा सम्म ठिक नहुने कति पय डाक्टरहरूको भनाई रहेको छ। यो एक दिमागी रोग भएका कारण अपरेसन गर्न साह्रै खर्चिलो र अप्ठ्यारो पनि हुन्छ।
छारे रोग एक दिमागी दौरा हो यदी यो रोगको रोगीले अचानक आँखा तिर्मिराउने र मन झस्किने संयोग पाएमा एक्कासी मुर्छा भएर ढल्न पुग्छ। उत्तानो परि सके पछि हात खुट्टा छटपाउँछ। केही बेर हात खुट्टा छटपटाएर मुखबाट राल छोडेर करिब आधा घण्टा सम्म रोगी वेहोस हुन्छ। यो समयमा रोगीलाई छोयो भने अरुलाई सर्न सक्छ भन्ने जन विस्वास पनि रहेको छ। करिब आधा घण्टा पछि रोगीलाई होस आउँछ।
रोगीलाई होसमा ल्याउन सकिने केही तरिकाहरू:
छारे रोगको रोगी उत्तानो परिसके पछि उसलाई छालाको जुता, कमर पेटी आदी सुँघाउदा छिटो होस् फर्किने अनुमान गरिएको छ। त्यसैले जति सक्दो चाँडै जुत्ता अथवा अन्य छाला निर्मित वस्तु सुँघाउने कोसिस गर्नु पर्छ। रोगीलाई छिटै भिड भाड अथवा पानी भएको क्षेत्रबाट टाढा लैजाने कोसिस गर्नु पर्छ। रोगीलाई छिटो होसमा ल्याउन रोगी मुख, टाउको, हात खुट्टामा पानीले भिजाइ दिनु पर्छ।
यस्ता ९ कुराले दिन्छ दाम्पत्य जीवन टुट्ने सङ्केत
✍ सबै जोडीमा आफ्नो दाम्पत्य जीवन सुखद् होस् भन्ने चाहाना हुन्छ। तर नचाहँदा नचाँहदै
पनि वैबाहिक जीवन भत्किन्छ र कैयौं जोडी छुट्टिन्छन्। विवाह टुट्ने कारण केलाउने हो भने कुनै कुनै त साह्रै सामान्य कारण समेत सामुन्ने आउँछन्। कतिपय जोडीले चाल नै पाउँदैनन् कि उनीहरुबीच के समस्या थियो। यहाँ वैबाहिक जीवनमा समस्या आउन लागेका संकेतबारे केही टिप्स दिइएको छ। जुन तपाइँलाई यस्ता समस्याबाट जोगिन सहयोगी बन्न सक्छ।
१. विगतको विषयमा बढि कुराः जव जोडीहरु
विगतका विषयमा बढी कुरा गर्छन् र एक अर्कालाई नाम काढेर बोलाउने वा गाली गर्ने तहसम्म उत्रन थाल्छन् तब बुझ्नु पर्छ कि सम्बन्धमा गम्भिर समस्या छ।
२. झगडाः दम्पतिबीच सामान्य भन्दा सामान्य विषयमा पनि झगडा हुन थाल्यो वा झगडाका लागि मात्र कारण खोज्न थाले भने उनीहरुको सम्बन्धको भविष्य धरापमा छ। अर्कोतिर जति झगडासँगै उनिहरुको निकटता पनि बढ्ने गर्दछ। दम्पती बिचको झगडा परालको आगो हुनुपर्छ एकचोटि चर्किएपनी छिनभरमै शान्त भई एकअर्कासँग नजिक भइ आफ्नो गल्ती महसुस र माफी माग्नाले असल दाम्पत्य जीवन स्थापना हुन्छ।
३. एकल निर्णयः दम्पतिमा राम्रो सम्बन्ध रहेसम्म एक अर्कालाई सोधेर सल्लाह गरेर निर्णय लिने हुन्छ। तर जब सम्बन्धमा विरक्तता आउँछ तब एक्लाएक्लै निर्णय लिने र एक अर्कालाई सोधपुछ नै नगर्ने हुन थाल्छ। यस्तो हुन थाल्यो भने सम्झनुहोस् दाम्पत्य जीवन धरापमा छ। यसमा मुख्य भुमिका अहमको हुन्छ।
४. इर्ष्याः दम्पतिमा समान्यतया स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ। तर जब समस्या आउँछ तब एक अर्कालाई होच्याउने वा अर्काको प्रगतिबाट जल्ने समस्या देखिन थाल्छ। मुख्य समस्या त एक अर्कालाई विश्वास गर्न छोडिन्छ।
५. परिवार भित्रै एक्लोः जब पार्टनरबीच राम्रो सम्बन्ध हुन्छ उनीहरुले परिवारलाई हाम्रो भन्छन्। तर समस्या आउन थालेपछि मेरो भन्ने भावना प्रधान हुँदै जान्छ जुन दाम्पत्य जीवनका लागि खतरनाक संकेत हो।
६. छलछामः जब दम्पतिमा विश्वास हराउँदै जान्छ, अनि एक अर्कासँग झुट बोल्ने विवाहेत्तरका सम्बन्धमा आउने जस्ता समस्या देखिन्छन्। जब यस्तो कुरा सतहमा आउँछ त्यसपछि परिवार टुक्रिनुको विकल्प हुँदैन।
७. सेक्समा उपेक्षाः जब जोडीबीच बैमनस्यता बढ्दै जान्छ, यौन सम्बन्ध गौण बन्छ। यसमा कुनै रस हुँदैन। यदी यौन गौण बन्न थाल्यो भने पनि बैबाहिक सम्बन्ध धरापमा पर्छ।
८. सुल्झाउने भन्दा बल्झाउनेः राम्रो सम्बन्ध हुँदा दम्पतिमा सामान्य समस्या आयो भने सुल्झाउने प्रति ध्यान हुन्छ। तर जब एक अर्काप्रति विरक्तता बढी हुन्छ तब समस्याको समाधान भन्दा थप समस्या निम्ताउने प्रवत्ती बढी देखिन्छ। यो पनि दम्पतिका लागि घातक संकेत हो।
९. संवाद विहिनताः जोडीबीच सम्बन्ध राम्रो हुँदा चाहिने भन्दा पनि बढि कुराकानी हुन्छ। तर सम्बन्ध विग्रन थालेपछि भने उनीहरुबीच अत्यावश्यक समयमा समेत संवाद हुन छाड्छ। जब संबाद विहिनता बढ्दै जान्छ त्यसले सम्बन्ध अन्त्यतिर आइपुगेको डरलाग्दो संकेत मात्र गर्छ।
तर माथि उल्लेखित कुरामा समयमै ध्यान दिने हो भने चाँही समस्याको समाधान निस्कने र वैवाहिक जीवनमा नयाँपन आउने सम्भावना रहन्छ।
बोल्न अप्ठेरो लाग्छ भने यसरी भन्नुहोस् मनका कुरा
✍ मायामा पर्नु भएको छ भने सुरुको अवस्थामा माया गर्ने व्यक्तिसँग कुरा गर्दा अप्ठेरो लाग्ने, लाज लाग्ने र मुख रातो हुने गर्दछ। यस्तो असहज अवस्था सायद धेरै मानिसहरुलाई भएको हुनसक्छ। यस्तोमा आफ्नो मनको कुरा भन्न धेरैलाई निकै कठिन भएको हुनसक्छ तर धेरै नबोल्ने मानिसहरुका लागि आफूलाई मनपरेको मान्छेसँग आफ्नो मनको कुरा खोल्नु कम गाह्रो हुँदैन। आफ्नो कुराहरु भन्न नपाएर तनावमा हुनुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई यस्ता तरिकाहरु भन्छौँ जसले गर्दा तपाईंले आफ्नो भावना मनपरेको व्यक्तिलाई भन्न सक्नुहुनेछ।
१. तयारी गर्नुहोस्: आफूलाई मनपरेको व्यक्तिसँग भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ भने मानसिक रुपमा तयार भएर जानुहोस्। उक्त व्यक्तिलाई भेटिसकेपछि सबै कुरा बिर्सेर केहि पनि बोल्ने नसक्ने जस्तो नहुनुहोस् त्यसकारण ती व्यक्तिलाई भेटेपछि के भन्ने कसरी भन्ने जस्ता कुराहरुमा तयारी गर्नुहोस् जसका कारण तपाईंले आफ्नो भावनालाई राम्रोसँग व्यक्त गर्न
२. आत्मविश्वासी बन्नुहोस्: आफैँलाई विश्वास गर्नुभयो भने तपाईंलाई आफ्नो भावना व्यक्त गर्न सजिलो हुने गर्दछ। उनलाई भेटिसकेपछि आफ्नो कुराहरु बिना रोकटोक पूरै आत्मविश्वासका साथ भन्नुहोस् र यसको नतिजा तपाईंले आफैँ देख्नुहुनेछ।
३. आफ्नो भावनालाई लेख्नुहोस्: यदि आफ्नो भावनालाई केहि गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्न जस्तो लाग्छ भने यसलाई लेख्नुहोस्। तर लेख्दा निकै राम्रा शब्दहरु प्रयोग गरेर कम शब्दमा लेख्नुहोस् अथवा यदि तपाईंलाई मन लाग्यो भने कुनै रोमान्टिक कविता पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। आफूले लेख्दा पढ्ने व्यक्तिले आफ्नो भावना बुझ्छ कि बुझ्दैन भन्ने कुरा पनि याद गर्नुहोस्।
४. आफैँलाई व्यक्त गर्नका लागि भिन्न तरिका अपनाउनुहोस्: यो ट्विटर र फेसबुकको जेनेरेसन हो। यदि तपाईं भेटेर कुरा गर्न डराइरहनुभएको छ भने अर्को तरिका अपनाउनुहोस्। यो विषयमा इमेलले तपाईंको मद्दत गर्नसक्छ। तर मेल लेख्दा पनि तपाईंले निकै बिचार गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसका साथसाथै तपाईंले मेसेजको सहारा पनि लिनसक्नुहुनेछ।
तरिका जे सुकै अपनाउनुहोस्, आफ्नो भावना व्यक्त हुने तरिका अपनाउनुहोस्।
सर्किनीको धारो "लघुकथा"
टण्टलापुर घामले ह्याक–ह्याक पारीरहेका बेलामा उकालाका फेदीमै निकै ठूलो खाने पानीको ट्याङ्की देखियो । चारतिर बाटो छुट्टिने चौबाटोमा लगभग तिन हजार गाग्री पानी अटाउँने सिमेण्टको पक्की पानी ट्याङ्कीमा जोर जोरै धारा हालिएका त थिए तर धाराका टुटीमा भने साँचो लगाएर पानी खोल्न नमिल्ने बनाइएको रहेछ । टुटीभन्दा निकैमाथि ट्याङ्कीकै भित्तामा रातो इनामेलले लेखिएको थियो–हातेमालो खानेपानी उपभोक्ता समूह मर्मत सम्भार समिति, बलम्बु ।
१) सम्पूर्ण सदस्यले धारा सफा राखौं ।
२) धारामा नुहाउँने, लुगाधुने,भाँडामाझ्ने काम नगरौं ।
३) पानी लानेजति सबै सदस्य बनौं ।
४) धारा खोल्ने समयः बिहान ५ देखि ९ बजेसम्म
बेलुका ४ देखि ७ सम्म
निकै बेर उकालो चढेर अलि कुनो र खोल्सी परेको ठाउँमा भाग्यले फेरी धारो भेटियो र एउटी बुद्धा कोकाकोलाका खाली बोतलमा पानी भरिरहेकी थिइन । पानीको आशाले छेउमा गएर बृद्धालाई सम्बोधन गर्दैं भनें–“आमै ! पानी खान पाइन्छ कि ?” मेरो स्वर सुनेर उनले पुलुक्क हेरीन् म तिर अनि मुसुक्क हाँसेर भनिन्, “पाइन्छ–पाइन्छ, किन नपाउँनु पानी खानकै लागि त हालेकी हुँ नि मैले यो धारो ।” दुई हातलाई अँजुली पारेर धित मरुन्जेल पानी खाइसकेपछि धाराको छेवैमा बसेर सोधे, “तपाईको घर चैं कता छ नि आमै ?” बुढियाले हातले यसो माथि देखाइन र भनिन्–“यही दुइ कान्लामाथि पर्छ ।” “अनि धारो त यति तल बाटामै राख्नु भएछ त मैले जिज्ञासा राखें । “बटुवाले पनि पानी खाउँन, कान्ला माथि धारो बनाउँने हो भने बाटो हिड्नेले घर त देख्तैनन् धारो कसरी देख्लान भनेर नि बाबु”, उनले बाटैमा धारो बनाउँनुको कारण खोलिन र थपिन –“तर के गर्नु र म एक्ली आइमाइसँग ठूलो ट्याङ्की बनाउँने पैसा नभएकाले तिन गाग्री पानी अट्नेमात्र बनाउँन सकें, यही भए पनि तिर्खाएर आएकाबेला घाँटी त भिजाउँन पाउँछन् भनेर घरमा नलगि बाटैमा धारो छोडि दिएकी छु । फेरी त्यही बाटो भएर फेदी झर्दा उही धाराका टुटीमा साँचो लगाइएको पानी ट्याङ्कीका पर्खाललाई आधार बनाएर एउटी महिला तरकारीको भारी मिलाउँदै गरेकी भेटिइन् । अनि मैले उनका छेउमा गएर सोधें,“बैनी यो के गाउँ हो ?” “खत्री गाउँ, उनले संक्षिप्त उत्तर दिइन । “अनि यहाँ त पानीको धारा बनाएर पनि चावी लगाएर राखिएको रहेछ त, पानी नभएरै हो कि किन होला ?”, मैले कुरा खोतलें । “किन नहुनु पानी ? छ नि, तर बाटो हिड्नेले खोलेको खोल्यै गर्छन र पानी पुग्दैन भनेर बन्द गरेको नि”–उनले जरक्क परेर उत्तर दिइन् । “बैनी, अलि माथि उकालामा त एउटा धारो खुलै छोडिएको रहेछ त, त्यो धारो चैं कस्को हो र खुला छोडिएको हो त ?” “मैले सोधीसक्ता नसक्तै फेरी उस्तै लवजमा उत्तर दिइन–“सर्किनीको” र थपिन–“त्यही भएर खुलै हुन्छ ।”
लेखक: जीवन डी. (राइटिङ नेपाल)
सम्मापदक : बिकास गुरुङ
Labels: लघु कथा, सामाजिक कथा
मैले जस्तो अनलाइनमा बोलाएर हेर,
रिसाएको छैन प्रिय च्याट गरेर हेर।
हाँसो भन्दा धेरै खुसि मिल्छ वेदनामा,
परेलीमा बन्छ नयन चलाएर हेर।
दुःख केहो पिडा के हो अविज्ञ छौ तिमी,
आलोघाउमा नुन चुक मोलाएर हेर।
दुःख पिडा जीन्दगीमा भुल्नु पर्छ भने,
सहयात्रिझै आत्म जलाएर हेर।
मिल्नेभए सारा खुसि तिमितिरै सारिदिन्थे,
उदास तिम्रो जीन्दगीलाई हरावरा पारिदिथेँ।
जीन्दगीको रंगमञ्चमा दुनियाँलाई साँक्षि राखि,
तिमीलाईनै जिताएर आफु सधै हारिदिन्थेँ।
मायाँले मुटु जल्दैछ प्रिय सम्झना आउदा,
छायाँले पनि छल्दैछ प्रिय सम्झना आउदा।
एकान्त खोजी बसेको बेला यो मेरो मनमा,
मुटुमा आगो बल्दैछ प्रिय सम्झना आउदा।
सागर जस्तो जीन्दगि कलकल बगिरहन्छ,
यो मुटुको धड्कनले केवल तिमी खोजिरहन्छ।
तिमी सधै वेवास्ता गरेर हिँडेपनी,
यो स्वार्थी नयन तिम्रै पछि डुलिरहन्छ।
आँखामा आँसु झल्केको बेला भन हाँसौँ म कसरी,
तिमी त मेरो भाग्य निर्माता छुटेर बाँचौँ म कसरी।
ढुकढुकीमा तिमी तिम्रै आँखामा हाँसो छ मेरो,
तिमी बिनाको सपना आँखामा राखौँ म कसरी।
नारी खुसि हुँदा फुलबारी रिस उठ्दा सिस्नोघारी,
कोही भन्छन् स्वास्नि घर कार्यालय हो घर कार्यालय अन्तर्गत पर्छ,
तर म भन्छु स्वास्नि कर कार्यलाय हो अर्थ मन्त्रालय पर्छ,
रासन, पानि, दुध, ग्यास, बिजुली, धारा तिर्नुपर्ने सारा - उनिहरुले कमाएझै निजि रे,
हामीले कमाएको चाहीँ साझा - हामि चाहि ठेकेदार,
ठेकदार भए किन मागेको मागेको बारम्बार अधिकार?
यो श्रीमती चिजै यस्तो भनेर मात्र कहाँ हुन्छ,
मोटरसाईकलको पछाडि राखेर हेर्नुस अनि मात्र थाह हुन्छ,
वेट हेर ग्याँसको सिलिन्डर जस्तो कानमा कराउछन माइक्रो बसको किलिन्डर जस्तो,
अर्काले सुन्दा रिलेसन कट हुन लाग जस्तो,
च्यारच्यार च्यारच्यार ट्रान्सफर्मरमा भोल्टेज बढि भई बिजुली सट हुन लागे जस्तो।
कानमा समातेर तानेको हुन्छ आँखा डुलाउन त चान्स नै छैन,
केटी हेर्न त परै जाओस सडकको पेटी हेर्न समेत पाईदैन,
के भन्ने श्रीमतीलाई नागरिकता भनौ लिने बेला फारम भर्नु पर्दैन पासपोर्ट भनौ रिण गर्नुपर्दैन, लालपुर्जा भनौ थोरै तिरोले पुग्दैन म्याद कहिल्यै जाँदैन,
लाइसेन्स भनौ रङ साइड हिड्दा ट्रफिकले समात्दैन।
यो श्रीमती भन्ने चिजनै कस्तो विवाहको मन्डपदेखी औला समातेर डोहर्र्याएको जिन्दगी भरी डोहर्याएर हिड्नुपर्ने रे - टायर पन्चड भएको मोटरसाईकल जस्तो,
महिनामा ३ दिन त्रिपल चार्जिङ, ४ दिन चौपट, ५ दिन पञ्चड, १५ दिन लम्पड बाँकी रह्यो ३ दिन कहिले हावा हाल्ने कहिले पञ्चड हाल्ने;
श्रीमतीको आखा छलेर हेरौँ कहाँ हेर्ने आज कालका केटीहरुको हेर्ने ठाउनै छैन;
मुखमा हेरौ क्वालिटी घढेको ओठ, शरिरमा छाना नभएको भेडी गोठ, लुगा लगाएको ठाउमा हेरौ
लाजमर्नु, नलाएको ठाउमा हेरौ झनै लाजैमर्नु;
घरमा बस्दा घ्वाम्ल्वा सिरक ओडेर बस्या हुन्छ, शहर घुम्न जाँदा टिसिक्क स्कट कस्या हुन्छ;
हेर्न मन लागेर यसो हेरेको त के हेरको रे, के हेरेको हैन के बेरैको भनेको मेरो पालो;
छि कस्तो छुचा रे, हो देखाउने चाहि अच्छ हेर्ने चाहि छुचा?
त्यहि ठाउमा हेर्नु पर्ने मेरो आँखा पनि निकालेर खेल्नुपर्ने गुच्चा;
बिहे अघि र पछि केटा र केटीको कुराकानी
कुनै पनि प्रेमि जोडि जब भेट हुन्छ तिनिहरुको कुरा र बिहे पछि उनिहरुको कुरा ठिक उल्टो हुन्छ।
बिहे हुनु अघिको कुरा माथि बाट तल अर्थात सुल्टो पढ्दै जानुहोस्:-
केटाः साँच्चि मैले यो क्षण धेरै कुरेको थिँए।
कटीः के भन्न खोजेको तिमि मलाई छोड्न चाहन्छौ?
केटाः होईन तिमि यस्तो नसँच।
केटीः के तिमि मलाई साँच्चै मन पराउछौ?
केटाः अफ् कोर्स सँधै भरी।
केटीः के तिमी मलाई ढाँट्दै छौ?
केटाः नो,किन यस्तो वाइयत कुरा सोच्दै छौ?
केटीः के तिमि मलाई किस गर्छौ?
केटाः सँधै भरी।
केटीः के तिमि मलाई पिट्छौ?
केटाः के तिमि पागल त भएनौ?
केटीः के म तिमिलाई बिश्वास गरौ?
[अब बिहेभयो बिहेपछि तिनिहरुको कुरा तलबाट माथि अर्थात उल्टो पढ्दै जानुस्] कस्तो लाग्यो?
राज र नुरको वियोगान्त प्रेम कथा
साउदीका हरेक पत्र-पत्रिकामा नुरको आत्महत्याको खबरले म आश्चर्यमा परेँ। म अफिस भित्रैको एउटा क्याबिनको कम्युटरमा ब्यस्त हुने मान्छे तर आज अचानक पत्रिकामा परेको एकै नजरले अचम्मै बनायो। हुन त मलाइ पनि कहाँ अरबी पढ्न आउथ्यो र? राजको मोबाइलमा देखेको फोटो को कारणले चिनेको मात्रै हो। मैले प्रत्यक्ष देखेको भने थिइन। (कालो बुर्का साउदीको महिलाले लगाउने कपडा लगाएर यात्रारत हुन्छन् यिनीहरु) रुखले त बरु आफ्नो पात बोक्राले ढाक्दैन तर उनीहरुको शरीरको कुनै ठाँउ पनि ढाक्न बाँकी राख्दैनन्। राजलाई झुन्ड्याएर मारिएको महिना दिन नहुँदै नुरको आत्महत्याले म मात्र होइन नुरका परिवार पनि अचम्मित भए होलान्। आज नुरको आत्महत्याको खबरले राजको अन्धकार पुर्ण दिन अनि उसलाई गुमाएको पल झलझल आँखामा आउन थाल्यो।
राज र म साउदी अरबको एक प्रतिष्ठित कम्पनिमा सँगै काम गर्र्थ्यौँ। हामी साउदीको मुटु राजधानी रियादमा थियौ। राज सप्लाइ डिपार्टमा कार्यरत थियो। उनी सप्लाइको क्रममा साउदीका घर-घरमा जानु पर्थ्यो। त्यसै क्रममा राजको भेट नुर भन्ने अरबियन केटीसँग भएको थियो। राज सँधै उनको बारेमा बताउथे। नुरको प्रशंसा गरेर कहिले पनि नथाक्ने राजको ब्यवहार देखेर म आफै थकित हुन्थे त्यस्तै साथको खोजीमा। राजको ब्याख्यानमा म आफै अलमल्ल हुन्थेँ। आखिर नुरमा के छ यस्तो? मलाइ राजले फोटो देखाए पनि म उनको रुपमा कहिल्यै विस्वास गर्दैनथेँ। रुपमा किन मर्छस् राज? सुन्दर फुल भित्रको राग-अनुराग अनी बिषादीको पनि अध्यन गर्न जरुरी हुन्छ। हुन त तेरो रोजाइ नराम्रो त हुन सक्दैन तर पनि होस् गर राज यहाँको कानुन तैले सुनेकै छस् । फेरी हकिकतमा देख्न नपरोस् । राज भावुक बनेर भन्थे,“बिशाल मायामा ज्यानै दिन परेपनि म तयार छु।" उनले दिएको यती माया नै मेरो जिन्दगीको पुर्ण खुसी बन्नेछ। हेरौं जे लेखेको छ यो भाग्यमा त्यही हुन्छ। मलाइ यही मर्न लेखेको छ भने मञ्जुर छ म पराइकै माटोमा मरौला। हो मलाइ मेरो स्वच्छ पशुपतीमा ठाँउ नमिल्ला, बाग्मतीको पानीले चोखिन नपाइएला, चन्दन सँगै जल्न नपाइएला तर मायामा दिएको ज्यान कहाँ खेर जान्छ र बिशाल? हुन त म अभागी ठहरीनेछु दुनियाँका नजरमा बिदेशको माटोमा पुरीँदा तरपनि माया भनेको माया हो । नेपाल रहँदा सम्म कोही कसैमा आँखा नपरेपनि यहाँ उनीमा आँखा पर्नु मेरो भाग्यको खेल हो, बिशाल जे होगा देखा जायगा ॥
नुर र राजको प्रेम देखेर मलाइ पनि डाहा हुन्थ्यो। मलाइ पनि प्रेममा डुब्न मन लाग्थ्यो । मरूभूमीको राप भित्र पनि राजको चमकता र मुस्कानले म सँधै प्रफुल्ल हुन्थें। उनिहरुको प्रेम झाँगिदै थियो। कहिले भेटेर, कहिले फोनमा त कहिले नेटबाट नै भएपनि लामो समय सम्म उनिहरुको एकआपसमा कुराकानी गरिरहन्थ्यो। म कहिले काँही जिस्काउथेँ, “राज तेरो त काम तमाम भो, भाउजु सँग मलाइ नि कुरा गरान त यार। म पनि यसो सुनौ मेरी हुनेवाला भाउजुको स्वर, जुन स्वरमा मेरो साथी राज अल्झिएको छ। मेरो कुरा सुने पछी राजले फोन लाउड स्पिकरमा राखेर सुनाउथ्यो, उता बाट आवाज आउथ्यो “मिन हुवा ?” (को हो ऊ) “राजले नरम भएर जवाफ दिन्थ्यो “सदीग” (साथी) बिशाल।
उनीहरुको कुरा कतीखेर सकिन्थ्यो मैलै कहिल्यैपनि थाहा पाइन। म आफैमा ब्यस्त हुन्थें, उनीहरु आफ्नै दुनियाँभित्र हराउएर कुरा गर्थे। एक कान दुइ कान मैदान हुँदै उनीहरुको प्रेम सम्बन्ध नुरको घरपरिवारले थाहा पाएछ। उनका बाबा आमाले पुलिसमा उजुरी गरेछन्। त्यसपछि ठूलो रडाको नै मच्चियो। अन्त्यमा राजलाइ फाँसी नै सुनाइयो। मर्नु त छँदै थियो सबलाई एकदिन तर उसलाई पर्सिपल्टनै फाँसी हुने कुरा पक्का भयो। समेट्नु पर्ने खुसिहरु हजार थिए तर समय थियो ऊ सँग जम्मा दुईदिन। दुई पलको भईदिएन त्यो प्रेमको सुखमय संसार। व्यथा कसलाई सुनाउँ सुनिदिने कोही थिएन, नबोली बसौं आफ्नो हितैसी मित्र जिएन। आखिर हुने हार दैब नटार भनेझैं त्यो रात आँखा चिम्लिन नपाउँदै आएरै छोड्यो। फाँसीको अन्तिम रात उसले एउटा पत्र लेखेको थियो र मलाइ भनेको थियो; बिशाल यो पत्र एक चोटी पढेर नुरलाई दे है । मैले किन हेर्नु राज भन्दा उसले भन्दै थियो, सायद तँ नै मेरो हरपलको मित्र, तँ बाहेक मेरो भन्नु को छ र यो बिरानो ठाउँमा? बाँचुन्जेल मेरो लागि कयौं कष्ट उठाइस् अब मर्नेबेलामा सानो कष्ट उठाइ दिन्नस? प्लिज नाई नभन तँलाई मेरो दोस्तीको कसम! तँ नै मलाई नुरको अगाडि निर्दोष सावित गरिदिने अधिवक्ता र मेरो सानो पाठसाल नुरकहाँ पर्र्याइदिने हुलाकी होस्। मेरो आँखा भरीदै थियो, म केही नबोली आज्ञाकारी बालकझै टाउको हल्लाउँदै सहमति जनाएँ। साथिसँग हुन गइरहेको बिछोडको पिडाको माथि उसले प्रहार गरेको वचनको झटारोले मेरो घायल मुटुमा अझ बढी बज्रपात पर्र्यो। जीवनमा बल्ल मुग्लान पस्नुको पीडा र पश्चताप महसुस भयो मलाई। म डाँको छाडेर रुन पनि सकि रहेको थिइन। मलाई सम्पूर्ण धर्ती आकाश फाटेझै लाग्न थाल्यो र बर्खे भेल एकैचोटि उर्लेर आएझै लाग्न थाल्यो तर अनौठो कुरा राजको मुहारमा भने डर, त्रास, पिर, चिन्ता भनेको पटक्कै थिएन। बरु प्रेमभाव विचित्र र रहस्यमय पाराले झल्किरहेको थियो।
फाँसीको अन्तिम दिन राजसँग अनयासै अँकलमाल गरि जब म उसले दिएको पत्र लिएर घर फर्कन लागेको थिएँ, तब ऊसँग आज अन्तिम पटक भेटेर फर्किदै छु भन्ने महसुस भएपछि मेरो मुटुले ढ्याङ्ग्रो ठटाउन लागेको थियो, मेरो हंसले ठाँउ छोडीरहेको थियो। मैले भगवानसँग लाख बिन्ती गरेँ राजको जीवन बचाउन तर पनि उसले मौन भएर हाम्रो छट्पटी हेरेरै मात्र बस्यो र बुझें, आखिर ती ढुङ्गा नै रहेछन्, तिनको मन नै रहेनछ, तिनलाई पुज्नुनै मेरो ठूलो मेरो जीवनको ठूलो भूल रहेछ। एक मनले गाली गरेँ ती अर्काको पीडा हेरेर बस्ने निर्दयी भगवानलाई अर्को मनले एकाएक बदलाको भावनाले मन उम्लिन थाल्यो ती सामन्तीहरु प्रति। अशान्त मनलाई धेरैबेरको प्रयासपछी सम्झाएँ; सोंचे जे भयो भयो, दैबको मर्जी यहि हो भने यसैमा सन्तोष मान्नुपर्छ। यी करोडौं मुस्लिम मान्छेहरुसँग मुकाबिला गर्न सक्ने सामर्थ्य छैन ममा। प्रकृतिकै नियम हो जन्म र मृत्युु यो। अजम्बरी जुनि कोही मानिसले पाएको छैन, राज र म मात्र नभएर दुनियाँको जो कोही मानिसहरु एकदिन अवस्य मर्नुपर्छ मात्र यो फरक हो कि, कोहि छिट्टै र कोही ढिलो गरी। यदि आफ्नो रिसलाई काबुमा राख्न नसके म पनि यही पराईको माटोमा जलेर मर्नुपर्छ। नेपाली भित्रको नेपालीपन यहि जलाउनु पर्छ। आफ्नो मनलाई कठोर बनाउदै विदाइको हातहरु हल्लाउँदै रुँदै, कराउँदै र विलौना गर्दै गाडी भएको ठाउँसम्म आँए। मानौं म एउटा वेसाहारा बालक हुँ, मेरो आफ्नै निजी मनपर्ने खेलौना अरु अर्कैले खोसिदिएको छ मुकाबुला गर्न सक्ने क्षमता छैन ममा म रुँदै हिडिरहेको छु। आफ्नो गाडी स्टार्ट गरेर अपार्ट सम्म आएँ। पहिला त सोंचे के लेखेको होला चिठी भित्र। हिम्मत आएन चिठी खोल्ने, वलिस्ठ हातखुट्टा पनि प्यारालाइसिस भएको बिरामीझै थरथरी काम्न थाले। तर साहस बटुल्दै हतार हतार उसको पत्र खोलेर पढी पनी हालेँ के लेखेको होला त्यसमा भनेर।त्यसमा लेखेको रहेछ:-
'मेरी नुर जुनी जुनी जिउनु ल!'
तिमी त म सँग अन्तिम पटक भेट्न पनि आइनौ। तर पनि कुनै गुनासो छैन तिमीसँग मेरो, यो त मेरो भाग्यको खेल हो। म तिम्रो जन्मभुमीमा हाम्रो मायाको बलि चढाएर तिमीसँग अर्को जुनि रहेछ भने सँगै जिउने सँगै मर्ने बाचा गर्दै तिमीले देखाएको सपनाको महलमा म आफ्नो दासी जिन्दगी बिसर्जन गर्दैछु। भेट्दा, कुरा गर्दा तिम्रो शालिन ब्यवहार र आनिबानिले म तिमीमै समर्पित हुँन्थेँ अनी अनौठो सपना बुनि पनि हाल्थेँ; तिमी मेरो सामिप्यतामा रमेको, म दुनियाँलाई बिर्सिएर तिम्रो प्रेममा चुर्लुम्न डुबेको। तिमीलाइ मेरो सिमली भुवा उड्ने गाँउमा लगेर कोइलीको स्वरसँग दोहोरी खेलाउने ठुलो धोको थियो, तर जिन्दगीले पनि मेरो प्रेमको किन यति ठूलो अग्नि परीक्षा लियो म आफैलाई थाहा छैन। तिमीलाई थाहा छ नुर? मेरो घर पहाडमा छ। प्रकृतीको धनी मेरो गाँउ डाँडा, पाखा, छहरा, पहरा, लहरा, सेतो हिमशिखरले भरीपुर्ण छ सायद तिमीलाई थाहा नै छ होला नेपालको सुन्दरता पढेकी पनि हौली, म त सगरमाथाको देशको मान्छे। तिमीलाइ सगरमाथा घुमाउने रहर त रहरै भयो। तर पनि मेरो ठम्याइ छ। त्यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यहरु तिमीलाइ देखेर मोहित हुने थिए, मोहोनी लगाउने थिए। कोइलीले आफ्नो स्वर निकाल्नु पहिले तिम्रो स्वर सुन्नचाहन्थ्यो। अनी म तिम्रा हात समाएर सबैको सामु भन्थें-“आना हेब ईन्त नुर”(म तिमीलाइ माया गर्छु नुर) हुन त तिम्रो र मेरो अन्तिम भेट यही पत्रमा हुनेछ। भाग्यमा भए प्रेम अमर भए अर्को जुनीमा भेटिनेछ तर आस छ भर छैन यो भाग्यको। भगवानको मर्जी न हो, जे चाहन्छ उही हुन्छ। सायद तिमी भगवान भन्दा बुझ्दिनौ होला तिमी भगवानलाई “अल्ला” भनेर चिन। भगवान भन वा अल्ला भन एक हुन मेरो नजरमा। कुनै धर्मले पाप गर, अरुलाई दुःख देउ, हिंसा गर भन्दैन। मलाई थाहा छ, तिम्रा बाबाले म हिन्दु भएकै कारणले मलाइ नकारेका हुन्। तिम्रा बाबाले धर्म परिवर्तन गर भनेर नभनेको पनि होइन तर मैले चाहिन त्यसो गर्न। किनकी धर्म परिवर्तनमा के नै छ र? म जहाँ जन्मिए, जुन संस्कारमा हुर्किएँ उही तरीका ले बाँच्न चाहेँ। कसको निधारमा लेखीएको हुन्छ यो मुश्लिम, यो क्रीश्चीयन, यो हिन्दु ...भनेर? हामीले विश्वास गर्ने, प्रार्थना गर्ने शैली मात्र फरक हो तर भगवान एक, रुप अनेक हुन्। तिम्रो बाबालाइ सुनाइ देउ की मेरो भगवान मानवता हो। तिम्रो बाबाको जस्तो स्वार्थी, पापी र अहंकारी अल्लाकार भावना मेरो ॐकारमा छैन। हाम्रो प्रेमलाई आड बनाएर तिम्रो बाबाले जुन धर्मयुद्ध लड्यो त्यो कदापि हुन धर्म सक्दैन, त्यो त अहमता हो आफ्नो इलाकामा कुकुर पनि शेर हुने चाल हो। धर्म फरक भएकै कारणले म जस्ता कति नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु यहाँ हेपिएको र च्यपिएको तितो यथार्थ छ। मान्छे आखिर मान्छे हो नुर, जन्मदा बालक स्वतन्त्र जन्मन्छ तर ऊ हर क्षेत्रमा बन्धनमा बाँधिन्छ। जात,धर्म, स्तर त हाम्रो समाजले नै बनाएको हो। तिमी आफै भन त, जन्मनु भन्दा अगाडी तिमी कुन धर्मको थियौ, कुन जातको थियौ? काटे रगत रातै आउछ सबको। हिन्दुको रगत रातो आउने अनी मुश्लिम र क्रिस्चियनको सेतो, हरियो, पहेंलो, निलो, कालो आउने हैन। आज महसुस भैरहेको छ सायद तिम्रो बाबाको रगत सर्पको जस्तो बिषालु र कालो रहेछ क्यार त्यसो त मानिस भन्दा फरक व्यवहार गर्र्यो मसँग। हुन त खोक्रो पहिचान र प्रतिष्ठाको धाक लडाएर हिँड्ने तिम्रो बाबालाई प्रेमको परिभाषा र महत्व के थाहा? सँधै पैसाकै पछाडी कुद्छन्। पैसा दिएर धर्म परिवर्तन गर भन्छन्। पैसाले माया पाइने भए संसारमा सबै पैसावालहरु पूर्ण र सन्तुष्ट हुन्थे। उपहार दिँदैमा, कुनै एक विशेष दिनमा बनावटी माया जाहेर गरेर माया गरेको भन्ने पार्ने तिम्रो बाबालाई माया गर्न सिकाउ नुर। तिमीलाई त माया गर्न आउछ नी है नुर। तिमी सँग भेट हुने यही अन्तीम हो। त्यसैले मलाइ यो पत्र टुङ्ग्याउन मन छैन अनी चाहन्न पनि तर पनि लामो गन्थनमा फस्दा लेख्दा लेख्दै अन्त्यमा तिमी सँग बिदा माग्न पनि नपाइयला की झै लाग्छ। त्यसैले हाम्रो भेट अब सक्नु पर्छ मैले। यो बेग रोक्नु पर्छ मैले जुन बेगमा म भावना पोखी रहेछु।
हाइयाक् अल्ला या नुर,मासलाम !!!
त्यतिकैमा कोही आएछ, दाइ के छ ओ? आजको हट न्युज! म झसङ्ग भएँ, सँगै कामगर्ने कुञ्जन भाई रहेछ।
कुञ्जन: आजको न्युज बबाल छ राज दाई!
विश्वास (म): के छ र भाई सुनौ न त म पनि।
कुञ्जन: नुरले आत्महत्या गरीछे नि यार।
विश्वास (म): को नुर, राजकी नुर?
कुञ्जन: अँ हो यार दाइ, राजसँग फोन बोल्ने त्यहीं केटी
विश्वास (म): तर त्यसले यतिका पछी किन आत्महत्या गरी त हँ? खै ले त पत्रिका हेरौं।
कुञ्जन: खै पनि मैले केही थाहा पाउन सकेको छैन दाई।
उसले मेरो हातमा पत्रिका दियो। कारण के हो, कसो हो पत्रिका ओल्ट्याई पोल्ट्याई हेरेँ चित्र त राजले देखाएको फोटोसँग काटिकुटी मिल्ने केटी रहेछ। पत्रिका अरबी भाषामा लेखिएको रहेछ। अब पत्रिका पढ्न जानेको भए पो घटनाको यथार्थ विवरण पाउन सक्थ्यो र जानेको छैन। नरमाइलो लाग्यो, केही दिन अगाडि घटेको त्यो घटना आँखामा झलझली नाच्न थाल्यो। पत्रिका डस्विनमा फालेर मन भुलाउन भित्र कोठामा गएर नेट खोलेँ। कुञ्जन पनि म सँग भित्र आयो। नेट खोल्ने बित्तिकै ईमेल आएको घण्टी बज्यो। सोंचेँ सायद अफिसियल होला। तर मेल नयाँ ठेगानाबाट आएको थियो। मैले सोंचे कसले किन पठाएको होला? अनि अल्मलीदै खोलीपनि हालेँ। अरबीमा लेखेको रहिछ मैले पढ्न जानीन र कुन्जनलाइ भने। यार भाइ कसरी पढ्ने? नयाँ एड्रेसबाट ईमेल आएको रहेछ तर कसरी पढ्ने यो त अरबी भषामा छ। उसले हाँस्दै भन्यो, 'यार दाइ हजुर पनि, इन्टनेरटबाट ट्रान्सलेट गर्नुन' यो जमानामा पनि यति कुराको के चिन्ता? मैले आज खासै सोच्न सकिरहेको थिइन अनी हो त नी है भन्दै ट्रान्सलेट गरेर पढ्न थाँलेँ, त्यो मेल यस्तो रहेछ....
'नमस्ते देवर बाबु'
सञ्चै हुनु हुन्छ?
मैले राजको बारेमा आजमात्र थाहा पाँए। मलाइ फोन, नेट सबैतिर बन्देज लगाइएको थियो। आजमात्रै सबै थोकबाट फुकुवा गरीएको हो मलाई। मेरो साथीले एउटा भिडियो हेर्छस् भनेर दिएको थियो। त्यो भिडियोमा राजलाई झुन्ड्याएर मारीएको रहेछ। जुन कुरा मैले सहन सकिन। भिडियो हेर्नु लगत्तै राजको चिठी पनि पाँए। उहाँसँग मैले पनि पत्रमा भेँटे। बिशाल बाबु हजुरहरुले त मलाइ निष्ठुरी भन्ने सोच्नु भएको होला तर म हजुरहरुले सोंचेजस्तो निस्ठूरी छैन। मेरो मुटुको टुक्राको फाँसीको कुराले म आफूले आफैलाई माफी गर्न सकिन। मलाई तिनीहरूले विदेश घुम्न जाने बहाना बनाई मेरो प्राण भन्दा प्यारो राजलाई फाँसी दिएछ र मलाई धोका दिएर अरूलाई बिहे गरेर कम्पनी छोडेर भाग्यो भनी झुटो कुरा सुनाएको थियो तर मलाई पूर्ण विश्वास थियो कि मेरो राजले त्यति निच काम गर्दैन र अवश्य फर्केर आउँछ भनेर। तर जब मैले सबै कुरा थाहा पाएँ मैले यो स्वार्थी संसारमा आफूलाई एकछिन पनि भुलाउन चाहिन। तर म तपाईहरुको नजरमा आफूलाई निर्दोष सावित गर्नु जरुरी थियो, त्यसैले मैले हजुरलाइ मेरो बारेमा भन्ने यही एउटा मेलको साहारा लिँए। मैले यो संसारबाट बिदा लिइसकेको हुन्छु जब तपाईंले यो मेल पाउनुहुन्छ। म निष्ठुरी होइन बिशाल बाबु। मैले पहिलो पटक कसैलाइ प्रेम गरेको थिँए जुन भाग्यशाली पुरूष थियो राज र सयौं जुनि प्रेम गरिरहन्छु त केवल राजलाई मात्र। सत्यता थाहा नपाउदा सम्म त राजसँग भेट्ने आसा जिँउदो थियो तर सबै कुरा थाहा पाए पछी मैले प्राण बिनाको खोक्रो शरीर जिउनुको अर्थ देखिन। मेरा आमा बाबा चाहनुहुन्छ म अरु कसैसँग विवाह गरोस् तर जुनिजुनिको लागि मेरो राजलाई सुम्पिसकेको यो तन मन म कसरी जिउदै मरेर अरुलाई सुम्पिएर राजको निश्चल प्रेमलाई अपहेलना गर्न सक्छु बिशाल बाबु? त्यसैले मैले आत्महत्या गर्ने निर्णय गरेँ। मैले गल्ती गरेको छैन केही मेरो प्रेममा सहिद भएको मेरो प्रेमी, मेरो जिवनसाथीको सेवा गर्ने हेतुले आज यो स्वार्थी संसारबाट सदाको लागी बिदा लिने अठोट गरेँ। मैले हजुरलाइ नदेखेपनि हजुरको बारेमा राजको ओठबाट सबै सुनेको छु। त्यसैले हजुरले मलाई निर्दोष ठान्नु भयो भने म राजलाई उ गएको ठाँउमा, हाम्रो प्रेमको सम्मान हुने ठाउँमा गएर मेरो मायाको सर्जिम बक्ने अधिवक्ता हजुरलाइ देखाउन सक्नेछु। मलाइ माफ गर्नुस् ल!
उही हजुरको भाउजु हुन नसकेकी हजुरले फोनमा जिस्काउने हजुरको भाउजु:
मेरो यो कथा राइटिङ नेपालमा प्रकाशित भएको छ पढ्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।